Size : 365 nos
ပန်းနာရင်ကြပ် နှင့် ပျား၊ ပျားရည် အလက်ဂျီရှိသူများမသုံးစွဲရပါ။
ပရိုတင်း၊ ကာဘိုဟိုက်ဒရိုတ်၊ ဗီတာမင်များ မြင့်မားစွာပါဝင်သည်။ တုပ်ကွေး၊ အသည်း၊ သရက်ရွက်၊ အိပ်မပျော်မှု၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ အရိုးကျိုးပဲ့ခြင်း၊ အသားအရေလှပစေခြင်း၊ ကိုလက်စထောမြင့်မားခြင်း၊ အရွယ်တင်စေခြင်းတို့အတွက် ကောင်းမွန်သည်။ တစ်ရက် 1~2 လုံး ၊ ပန်းနာရင်ကြပ် နှင့် ပျား၊ ပျားရည် အလက်ဂျီရှိသူများမသုံးစွဲရပါ။
Royal jelly is used for hay fever, liver disease, pancreatitis, sleep troubles (insomnia), premenstrual syndrome (PMS), stomach ulcers, kidney disease, bone fractures, menopausal symptoms, skin disorders, and high cholesterol. It is also used asageneral health tonic, for fighting the effects of aging, and for boosting the immune system.
Visitors : 434682